यौन शिक्षा::Best News Experience from Nepal
संसारभरी नै एउटा मान्यता छ महिलालाई बुझ्न कठिन हुन्छ । केटीहरु कम बोलेर धेरै कुरा भन्छन् । पुरुषले महिलाका कुरा केवल बोलीबाट मात्र बुझ्न सक्दैनन् । उनीहरुको ब्यवहार पनि बुझ्नु महत्वपूर्ण हुन्छन् । महिलाले यौनिक चाहना पनि शब्दमै ब्यक्त नगर्ने एक अध्यनले देखाएको छ । यहाँ महिलाले यौन सम्बन्ध राख्न चाहेको समयमा देखाउने ५ ब्यवहारको चर्चा गरिएको छ । १। महिला अनपेक्षित रुपमा तपाइँको शरीरको सामिप्यतामा आउन खोजिन् वा तपाइँलाई...
एजेन्सी । उमेर धल्कीदै गएपछि मानिसमा यौन रुची तथा यौन क्षमतामा पनि कमी हुनु स्वभाविकै हो । यस्तो अवस्थामा मानिसहरुको यौन जिवन निकै निरास हुने अनुमान गरिन्छ । तर एक अध्ययनले भने यस्तो अनुमानलाई गलत सावित गर्दै ४० वर्षको उमेर पुगेपछि मानिसको सबैभन्दा मज्जेदार यौन जिवन सुरु हुने देखाएको छ । ४० देखि ५९ वर्ष उमेरका २४ सय जना क्यानेडाली मानिसहरुमा गरिएको अध्ययनको आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो । शोधकर्ताहरुले उक्त...
हाम्रो समाजमा यौनको कुरा गर्दा बित्तिकै टाढा भाग्ने गरिन्छ । तर बास्तबिक त यहि हो कि यौन हाम्रो जिवनको महत्वपूर्ण भाग हो । यौनको विषयमा मानिसले उमेर पुगेसँगै जान्ने विषय पनि हो । आज हामी यौन सम्बन्धी केही यर्थाथ तथ्यहरुको चर्चा गरेका छौँ । यौन सम्बन्धी केही यर्थाथ तथ्य – सम्भोगले मानिसको पीडा सहनसक्ने क्षमता बढाउँछ । सम्भोगको चरम सुखका बेला शरीरमा उत्सर्जन हुने हर्मोनले पीडा कम गर्दछ र पीडा सहने...
बुटवल । नेपालमा धेरै जसोले विवाहपछि मात्र यौन सम्पर्क स्थापित गर्दछन् भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनबाट प्रस्ट भएको छ। तथापि, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण तथा उच्च शिक्षासँगै विवाहपूर्व यौन सम्बन्ध राख्नेको संख्या बढेको छ। आज हामी विवाह अगाडी राखेको यौन सम्बन्ध थाहा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारे चर्चा गरेका छौँ । विवाहपूर्व यौन सम्पर्क राखिएको कुरा थाहा पाउन गाह्रो छ। पुरुषलाई महिलाको यौनांगबारे सामान्य जानकारी हुने भए पनि आफ्नै यौनसाथीको योनिको बनावट र...
एजेन्सी । महिला हुन् बा पुरुष यौन सम्पर्कका बेला सबैले फरक फरक अनुभुति होस भन्ने अपेक्षा त राखिहाल्छन् । यद्यपी महिलाहरू जीवनमा केही न केही फरक खालको सेक्स अनुभव गर्न चाहने एक अन्तराष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ । मौका पाउँदा उनीहरुले अनौठो–अनौठो यौनिक अभ्यासको परीक्षण समेत गर्न मन पराउने तथ्य उक्त अध्ययनबाट देखिएको हो । युवतीहरुले यौनको बारेमा कस्ता–कस्ता कुरा सोच्छन् भन्ने विषयको अध्ययनपछि यस्तो निष्कर्ष निस्कीयको छ । निर्वस्त्र हुन चाहनो महिलाहरु पुरुषको...
बुटवल, । जंगलमा युवतीलाई मुख थुनेर बलात्कार गर्ने बुटवलका एक टोल सुधार समितिका अध्यक्षालाई मुद्धा दायर गरिएको छ । घटना फागुन २९ गते रातीको भए पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा हालै मात्र पुष्टि गरेको हो । बुटवल उप–महानगरपालिका वडा नम्वर–११ सुकुम्वासी वस्ती, सिर्जनानगर टोल सुधार समितिका अध्यक्ष माधव जिसी स्थानिय अन्दाजी १७ बर्षिया युवती माया शर्मा ( नाम परिवर्तन ) लाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परि अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको प्रहरीले...
गर्भ रोक्न पुरुषको शरीरमा ‘डिभाइस’
बुटवल । यौनको विषयलाई लिएर विश्वभर वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानहरु भइरहेका छन् । यसै क्रममा केही शोधकर्ताहरु पुरुषको लागि गर्भनिरोधक औषधि बनाउन लागि परेका छन् । यसमा हालसम्म कुनै सफलता प्राप्त नभए पनि केही समयमा यसको उपाय बजारमा पाइने शोधकर्ताहरुको मान्यता छ । अनुसन्धाताहरुका अनुसार पुरुषको शरीरमा एक डिभाइस लगाइनेछ । यो डिभाइसमा एक स्विच हुनेछ र यसको माध्यमले वीर्यलाई अन अथवा अफ गर्न सकिने बताइएको छ । यो स्विच वीर्यनलीलाई ब्लक गर्न...
हस्तमैथुनको आश्चर्य चकित पार्ने फाइदा
एजेन्सी । हस्तमैथुन बारे फरक मानिसका फरक फरक धारणा रहेका छन् । तर स्वास्थ्यका हिसावले भने हस्तमैथुन अत्यन्त स्वाभाविक र गैरहानिकारक यौन क्रियाकलाप हो। हस्तमैथुन गर्नु कुनै नराम्रो र अनैतिक होइन् । हस्तमैथुनलाई कयौं दृष्टीले फाइदाजनक र उपयोगी मानिएको छ। जसको चर्चा आज हामी गरेका छौँ । – हस्तमैथुनले सेक्स झैं मानिसलाइ चरम आनन्द दिन्छ । यसले मानिसलाई कल्पनाशिल बनाउँछ। – हस्तमैथुन स्वस्थ्य रहने एउटा गतिलो उपाय हो। हस्तमैथुनका धेरै फाइदा...
एजेन्सी । यौनसम्पर्क शारीरिकजस्तो देखिए पनि यसमा मानसिक पक्षको पनि उत्तिकै भूमिका छ । अझै हाम्रो समाजमा यौनका मामिलामा खुलेर बोल्न सक्दैनन् । सामाजिक दृष्टिले अस्वीकार्य तथा सानै उमेरमा यौन दुव्र्यवहारमा परिएको छ भने कालान्तरमा यौन प्रति डर उत्पन्न हुन्छ । कलिलो उमेरमा यौन दुव्र्यवहार वा यौन हिंसाबाट प्रताडितबाहेक आफूले मन नपराएको व्यक्तिसँगको विवाह वा वैवाहिक बलात्कारको घटनाले समेत यौनप्रति वितृष्णा जाग्ने वा डर उत्पन्न हुने हुनसक्छ । यस्तो डर नजिक हुनेदेखि...
महिनावारीका बेला रक्तश्राव चाँडै रोक्न के गर्ने ?
साधारणतया कोही पनि स्वस्थ महिलाको महिनावारीका बेला हुने रक्तश्राव तीनदेखि पाँचदिनसम्म रहन्छ । यसले कतिबेला निकै तनाव पनि दिने गर्छ विशेषगरी बाहिर जानुपर्ने अवस्थामा । तर कतिपय अवस्थामा आफ्नो महिनावारीको रक्तश्रावलाई प्राकृतिक रुपमा नै चाँडै समाप्त गर्न सकिन्छ । महिनावारीका बेला रक्तश्राव चाँडै रोक्न के गर्ने ? सेक्स – सेक्सको क्रममा तपाईंको गर्भाशयमा केही संकुचन हुने गर्छ । विशेषगरी तपाईं चरमोत्कर्षमा पुगेका बेला यस्तो हुन्छ । यी संकुचनका कारण रगत एक झट्कामा...